Ivenkile yeApple inokunyanzela uhlaziyo lweAirPods Pro yakho eyonakeleyo | Ndisuka kuMac
Ivenkile yeApple inokunyanzela uhlaziyo lweAirPods Pro yakho eyonakeleyo
Ndilinde itshaja yam iintsuku ezintathu MagSafe ihlaziywa kwinguqulo yayo yamva nje ye-firmware ekhutshwe kwiveki ephelileyo kwaye akukho ndlela. Kwaye ekubeni ndingakwazi ukunyanzela uhlaziyo, andinakulinda kwaye ndithandazele ukuba kwenzeke.
Nge AirPods kwenzeka ngokufanayo kanye. Kuya kufuneka ubashiye kufutshane ne-iPhone kwaye ulinde ukuba kwenzeke ummangaliso ngalo lonke ixesha kukhutshwa uhlaziyo. Ewe ngoku kuye kwavela ukuba ukusukela kule veki abalungisi abagunyazisiweyo kunye neVenkile ye-Apple baya kuba nakho ukunyanzela uhlaziyo oluxeliweyo lwe-AirPods Pro efika yonakele. Yintoni ilaphu.
Ngokoxwebhu lwangaphakathi lwe-Apple, ukuqala kule veki, iinkonzo zokulungisa ezigunyazisiweyo ze-Apple kunye nezo zingaphakathi kwe-Apple Store ziya kuba nesixhobo ukwazi "ukunyanzela" ukuphucula kuguqulelo lwamva nje lwe-firmware kwi-AirPods Pro efikayo ukuze ilungiswe.
Isixhobo siya kuvumela amagcisa ukufikelela kwi-Apple Service Toolkit 2 ukukhuphela i-firmware yamva nje kwi I-AirPods Pro bafumana ukulungiswa. Ke, xa sele ihlaziywe, ukuba ingxaki ayikasonjululwa, banokugqiba ukuba benze ntoni ngabo.
Uxwebhu oluvuzayo alukwenzi kucace ukuba esi sixhobo sisebenza nakwezinye iimodeli ze-AirPods, njengee-AirPods zamva nje 3. Ithetha kuphela nge-AirPods Pro. Inyaniso kukuba lusizi, kwaye asazi ukuba kutheni, kutheni. apile ayivumeli umsebenzisi Unako "ukunyanzela" olu hlaziyo nge-iPhone yakho eqhagamshelwe kwii-AirPods zakho.
Kwale ngxaki inye yenzeka nakwezinye izincedisi zenkampani, ezinje ngeMagSafe itshaja engenazingcingo okanye ibhetri yangaphandle nayo iMagSafe. Ngokuchanekileyo ezi zixhobo zimbini zihlaziywe kwiveki ephelileyo. Inye kuphela into onokuyenza kukukhangela inguqulelo ye-firmware efakiweyo. Shiya i-iPhone yakho yokutshaja, ngoqhagamshelo lwe-intanethi, kwaye ulinde i-accessory ukuba ihlaziye ngokuzenzekelayo, ngaphandle kokukwazi ukukhawulezisa inkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Ivenkile yeApple inokunyanzela uhlaziyo lweAirPods Pro yakho eyonakeleyo
Obona buso buxhasayo be-Apple buvela kwakhona kunye neenkanyamba ezinzima e-US
Ndisisebenzisa njani iSibhalo esibukhoma kwi-macOS? Kulula ukuba uyayifunda le tutorial